भजनसंग्रह 104 ERV-NE;NIV - हे मेरो आत्मा - Bible Gateway
भजनसंग्रह 103भजनसंग्रह 105
भजनसंग्रह 104 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
104 हे मेरो आत्मा परमप्रभुको प्रशंसा गर।
हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, तपाईं महान् हुनुहुन्छ!
तपाईं आदर र महिमाले सजिएको हुनुहुन्छ।
2 तपाईं ज्योति पहिरनु हुन्छ जसरी मानिसहरू पोशाक पहिरिन्छन्।
तपाईं पर्दा जस्तै आकाशहरू फैलाउनु हुन्छ।
3 परमेश्वर, तपाईंले तिनीहरूमाथि आफ्नो घर बनाउनु भयो।
तपाईंले बाक्लो बादलहरू रथ सरह चलाउनु भयो,
अनि बतासको पखेंटाहरूमा आकाश तरेर चढ्नुभयो।
4 परमेश्वर, तपाईंले आफ्ना स्वर्गदुतहरूलाई बतास जस्ता
अनि आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला जस्तै [a] बनाउनु भयो।
5 हे परमेश्वर, तपाईंले यसको आधारमा पृथ्वी बनाउनु भयो,
यसैले यो ध्वंश हुने छैन।
6 तपाईंले यसलाई वस्त्रले जस्तै पानीले ढावनु भयो।
पानीले पर्वतहरू छोपीए।
7 तपाईंले आज्ञा दिनुभयो, अनि पानी आतूरी गर्दै निष्कियो।
परमेश्वर, तपाईं पानीमा चिच्याउनु भयो, अनि पानी आतूरी गर्दै निस्कियो।
8 पानी पर्वतहरूबाट तल र्झन थाल्यो, खाडीहरूमा झर्दै,
र त्यसपछि ती ठाउँहरू तर्फ लाग्यो जुन तपाईंले बनाउनु भयो।
9 तपाईंले समुद्रहरूको सीमा तयार पार्नु भयो
ताकि पानी कहिल्यै पृथ्वी तर्फ उर्लेर ढाक्ने छैन।
10 हे परमेश्वर, तपाईंले पानीलाई झरनाहरूबाट नदीहरूतिर बहने बनाउनु भयो।
यो पर्वतहरूको जलस्रोतबाट तलतिर बहन्छ।
11 नदीहरूको पानी सारा जंङ्गली जनावरहरूको निम्ति हो
अनि यहाँसम्म कि जंङ्गली गधाहरू पनि यहाँ पानी पिउन आउँछन्।
12 जङ्गली चरा-चुरूङ्गीहरू पोखरी भए तिर बस्न आउँदछन्।
तिनीहरू छेउकै रूखका हाँगामा बसेर गाउँदछन्।
13 परमेश्वरले बर्षालाई पर्वतहरूमा पठाउनु हुन्छ।
चीचहरू जुन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र पृथ्वीलाई दिनु भयो ती त्यसैको आवश्यकता हुन्।
14 परमेश्वरले पशुहरूको आहारको निम्ति घाँस उमार्नु भयो।
उहाँले हामीलाई सागपातहरू रोप्नलाई दिनुभयो।
जसलाई हामी हुर्काउने काम गछौं।
ती सागपातहरूले पृथ्वीदेखि हामीलाई भोजन दिन्छन्।
15 परमेश्वरले हामीलाई दाखरस दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई खुशी तुल्याउँछ,
तेल जसले हाम्रो छाला नरम पार्दछ,
अनि भोजन जसले हामीलाई बलियो बनाउँदछ।
16 लबानोनको विशाल देवदारू रूखहरू परमप्रभुको सम्पत्ति हुन्।
परमप्रभुले ती रूखहरू रोप्नु भयो अनि त्यसलाई आवश्यकता भरि पानी दिनु भयो।
17 चरा-चुरूङ्गीहरूले त्यसैमा गुँड लगाउँछन् अनि त्यहाँ बस्छन्।
सल्लाका रूखहरूमा सारसहरू फिंजिएर बस्दछन्।
18 उच्च पर्वतहरू जंङ्गली बाख्राहरूको लागि घर हुन्।
विशाल चट्टानहरू खरायोहरूको लागि लुक्ने ठाउँ हुन्।
19 परमेश्वर जब बिदाहरू प्रारम्भ हुन्छ तपाईंले हामीलाई दर्शाउनुका लागि जुन दिनुभयो।
अनि घामले कहिले अस्ताउनु पर्छ त्यो जान्दछ।
20 तपाईंले अन्धकार पार्नु भयो रात हुनलाई,
त्यस समय जङ्गली पशुहरू बाहिर निस्कन्छन् र चारैतिर घुम्दछन्।
21 सिंहहरूले आक्रमण गर्दा परमेश्वरलाई आहार मागे झै गरी गर्जन्छन
जुन उहाँले तिनीहरूको निम्ति व्यवस्था गरिदिनु हुन्छ।
22 त्यसपछि घाम उदाउँछ, अनि पशुहरू आफ्ना घर तर्फ फर्कन्छ
अनि विश्राम गर्दछन्।
23 तब मानिसहरू आफ्नो काम धन्दा तिर लाग्दछन्
अनि साँझ सम्म काम गरि रहन्छन्।
24 हे परमप्रभु, तपाईंले धेरै चकित थोकहरू गर्नुभयो।
पृथ्वी त्यही थोकहरूले भरिपूर्ण भई भरिएको छ।
हामी जताततै प्रत्येक थोकमा तपाईंको बुद्धिमता देख्छौं।
25 समुद्रलाई हेर त्यो कति ठूलो छ।
अनगन्ती प्राणीहरूले त्यो भरिएकोछ।
त्यहाँ ससाना र विशाल अनगन्ति प्राणीहरू छन्।
26 त्यस समुद्रमा जहाजहरू चल्दछ,
लिब्यातान समुद्रमा खेल्छ।
महा-सागरमा समुद्री प्राणी तपाईंले सृष्टि गर्नुभयो ।
27 परमेश्वर, ती सारा जीवित प्राणीहरू तपाईंमा आश्रित छन्
तपाईंले ठीक समयमा तिनीहरूलाई भोजन दिनुहुन्छ।
28 परमेश्वर, तपाईंले सारा प्राणीहरूलाई भोजन दिनुहुन्छ।
तपाईंले आफ्ना हातहरू खोलेर, राम्रो पौष्टिक भोजन दिनुहुन्छ,
अनि तृप्त नहुन्जेलसम्म तिनीहरू खान्छन्।
29 जब तपाईं तिनीहरूबाट टाढा फर्किनुहुन्छ,
तिनीहरू भयभीत हुन्छन्।
तिनीहरूका आत्माले तिनीहरूलाई छोड्छ, तिनीहरू कमजोर भएर मर्छन्
अनि तिनीहरूका शरीरहरू फेरि धूलोको कण नै बन्दछन्।
30 तर हे परमप्रभु, जब तपाईंले आफ्नो आत्मा पठाउनु हुन्छ,
अनि तिनीहरू स्वास्थ्य हुन्छन्।
अनि तपाईंले फेरि भूमि नयाँ बनाउनु हुन्छ।
31 परमप्रभुको महिमा अनवरत अनन्त रहीरहोस्!
उहाँले सृजना गर्नुभएको कुराहरूमा उहाँ आनन्दित होउन्।
32 परमप्रभुले पृथ्वी तिर मात्र हेरि दिंदा पनि त्यो कम्पन हुनेछ।
उहाँले पर्वतहरूलाई छोडदिंदा मात्र तिनीहरूबाट धुवाँ उड्न थाल्छ।
33 मेरो जीवनभरी परमप्रभुको प्रशंसाको गीत गाउनेछु।
जबसम्म म बाँच्छु परमप्रभुको प्रशंसा गरिरहेने छु।
34 भरोसा छ मेरो यी शब्दहरूले उहाँलाई खुशी पार्नेछ।
म परमप्रभुसित खुशी छु।
35 पृथ्वीबाट पापहरू हटी जाओस्।
दुष्ट मानिसहरू सदाको लागि हराएर जाऊन्।
मेरो प्राणले परमप्रभुको जयजयकार गर्दछ।
भजनसंग्रह 104:4 परमेश्वर … ज्वाला जस्तैअथवा “परमेश्वर तपाईंले आफ्नो स्वर्गदूतहरूलाई आत्मा जस्तै र आफ्नो दासहरूलाई आगोको ज्वाला जस्तै बनाउनु भयो।” हुनसक्छ यो करूब़ स्वर्गदूतहरूको बारेमा भएको हो।